Ọdịnihu Mac n'ọdịnihu Ga-eburu Chips Chips, Dị Ka Nzukọ Ezubere na Cupertino | Esi m mac
Ọdịnihu Mac nwere ike iburu Chips Chips, dịka nzukọ emere na Cupertino
N’oge awa ole na ole gara aga, anyị mụtara na Apple kpọrọ ọtụtụ ndị nta akụkọ ka ha gaa okpokoro okirikiri a na-eme na Cupertino. E gosipụtara ọtụtụ isiokwu metụtara Mac. N'ime ha: ọkwa a na-adịbeghị anya banyere Mac Pro mmeghari ohuru, ohere nke Mac na ihuenyo mmetụ na nnabata Chips ARM na Macs n'ọdịnihu. Ndị nrụpụta ọhụrụ a ga-anọchi Intel dị ugbu a. Ọ bụ ezie na o doro anya na ozi niile ebipụtara: mgbe a ga-edochi ha ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ kpamkpam ma ọ bụ nke nta nke nta. Usersfọdụ ndị ọrụ na-eche na ụfọdụ Mac nwere ike ịbụ ngwakọ: na-ebu Intel na ARM ibe n'otu oge.
Companylọ ọrụ ahụ enweghị atụmatụ maka mmetụ ahụ na Mac, ma ọ bụ maka igwe ndị na-arụ ọrụ naanị ụdị ụdị ARM, nke eji na iPhone na iPad.
Agbanyeghị, ndị isi hapụrụ imeghe ohere nke ibe ARM nwere ike ịrụ ọrụ sara mbara dị ka ndị na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ ahụ, ihe izizi pụtara na nhazi T1 nke na-enye aka Ogwe aka na nke ọhụrụ. MacBook Pro.
Ọzọkwa, Director Marketing Phil Schiller nyere a Nweta "mba", mgbe a jụrụ ya banyere ohere nke ịhụ Mac na ihuenyo mmetụ.
Nke ahụ bụ mkparịta ụka ogologo ọzọ, mana zuo iji kwuo, ọ bụghị nnukwu mkpa maka ndị ahịa Mac Pro.
Phil Schiller gafere ọnwa ole na ole gara aga na ha ji Mac nwere ihu igwe dị mma, ma na mgbe ọtụtụ ule gachara, ndị a ekwenyeghị. O doro anya na mgbe ule ndị a gasịrị, ha kpebiri imejuputa Touch Bar na Macs ọhụrụ.
Akụkụ dị mkpa nke akụkọ ahụ bụ ọkwa nke iji ARM Chips na Macs n'ọdịnihu.Ọ bụ eziokwu na ụlọ ọrụ ahụ ezubeghị iji dochie ha kpamkpam, mana ịmalite iso ha rụọ ọrụ. Ndị a bụ Chips nwere obere oriri na ụfọdụ, yana uru ka mma. A na-eji anyị ahụ ihe owuwu akwụkwọ na nhazi nke Macs anyị, dịka mmejuputa Fusion Drive. Ọ bụghị ihe ijuanya na ụfọdụ ndị dị otú ahụ anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ọdịnihu Mac nwere ike iburu Chips Chips, dịka nzukọ emere na Cupertino
iResizer na Super Eriser, ngwa abụọ iji mezuo foto gị maka ihe na-erughị euro